WOWOW 8 In. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esingu-2-Handle Chrome Bathroom
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW 8 Ku. Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu esinezibambo ezimbili ku-Chrome
Khetha imishini yokucwilisa yokugezela isabalele 2320300C efanele ukusetshenziswa kwakho, bese usebenzisa ngokunethezeka kakhulu; lowo omkhethayo uhlala ehamba phambili. Sizokwenza, njengokuhlala njalo, silondoloze ikhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle ukubuyisa amakhasimende, futhi ngibheke phambili ekuhlanganyeleni okuningi nawe! Ukusuka ekukhetheni kwezinto ezibonakalayo kuya ekulinganiselweni ekusekelweni, sisebenze kanzima ukukunikeza ikhwalithi engcono.
2320300C imiyalo yokufaka
Bathroom faucet chrome 2 asingatha 2320300C
Isikulufu sendlu yokugezela esakazekile nakanjani sinikeza ukuthinta okuhle kunoma iyiphi indlu yokugezela. Enye inzuzo enkulu yesikhumulo sendawo yokugeza ebanzi ebanzi 2 ukuthi uyakwazi ukuxubanisa ukuhamba kwamanzi ngokwezifiso zakho eziqondile. Isikhiphi sendawo yokugezela ebamba nge-2 ikuvumela ukuthi ulawule amanzi ashisayo nabandayo ngawodwana, kufaka phakathi izinga lokuhamba kwayo. Ngenxa yalokho, awusoze wenza iphutha futhi futhi uchithe amanzi ashisayo ngenkathi empeleni ungawadingi. Noma okubi kakhulu, ukushisa izandla zakho ngamanzi ashisayo. Ngakho-ke isibambo sethu sendlu yokugezela isithambo se-2 siyisixazululo esihle nesiphephile sendlu yakho yokugezela.
Umpompi ophakeme wokugezela one-7-design ekhethekile, unikeza ukuthintwa okukhethekile kunoma iyiphi indawo yokugezela. Abaqambi be-WOWOW baziwa kabanzi ukuthi bahlale befuna imiklamo enesibindi yokwenza umehluko ngamapayipi ayo okugezela. Ngenxa yalokho, ompompi bokugezela be-WOWOW bahlala behluke kancanyana kwezinye ompompi bendawo yokugezela ozowathola. Lokho kukusiza ukuthi unikeze indlu yakho yokugezela umhlobiso okhethekile futhi oyingqayizivele. Lesi sici esiyingqayizivele uzosithola kufayela le- indlu yangasese ompompi chrome Izibambo ezi-2 ze-WOWOW. Le ompompi yokugezela nakanjani izonikeza ukuthuthuka okuphawulekayo endlini yakho yokugezela.
Ukufaka isibambo sendlu yokugezela chrome 2 izibambo
Ukufaka izibambo zokuphetha zekhabhathi lokugezela i-chrome 2 uzodinga isinki lokugezela elinemigodi engu-3. Ngokuvamile, izimbobo ezibekelwe zona ngaphambili zokubamba zombili zibekwe ku-intshi ongu-4 ukusuka faucet uqobo. Kepha ungazikhethela ibanga ngokwakho uma ungenaso isinki sokugezela esibekelwe ngaphambili. Izibambo zingafakwa ku-4 tot 16 inched from the faucet itself. Ngakho-ke kukuwe ukunquma ibanga eliqondile. Ukufaka izibambo udinga nje izimbobo ezingeziwe ezi-1 kuya ku-1,5 inch. Ubukhulu bepuleti yedeski lingafika ku-1,2 inch.
Isipikili se-2 se-2 se-handover seWoodow sakhiwe ngendlela eyingqayizivele yokwakha. Amanzi ashisayo nabandayo angafakwa ngoxhumo olufaka ngokushesha ngaphandle kokusebenzisa i-wrench. Ngenxa yale nqubo entsha, uzovikela amapayipi amanzi ukuthi aqhume. Le faucet yokugeza iza nephakheji ephelele yokufaka, kufaka phakathi iqoqo lamapayipi okuxhuma okusheshayo kanye neminye imigqa yokuhlinzekwa kwamanzi. Ngale kit yokufaka uzokwazi ukufaka lesi isekeli sokugeza isikulufa se-chrome 30 uzisingatha ngaphandle kokuqasha ipayipi. Uzonga kakhulu ngokufaka izindleko ngemuva kokufaka ividiyo elula ye-WOWOW. Ukufaka kungenziwa ngemizuzu nje engama-XNUMX ngaphandle kokuhlupheka. Akulula?
Design yokugezela isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu chrome 2 izibambo
Iphedi yokugezela isikulufu sokugezela i-chrome 2 isingatha idizayini eyakhiwe kahle enobuso obushelelezi ozobukeka umangalisa cishe kunoma yisiphi isitayela sendlu yokugezela. Izimbambo zensimbi ezibambe kabili zikunikeza ukulawula okulula. Ama-levers abukeka emangalisa ngemigqa yawo eqondile nokuklanywa kwe-ergonomics. Izimbungulu zikalwa ngendlela efanelekile ezibenza bakulungele ukulawula futhi zikhululekile ukuguquka. Ungasebenza ama-levers ngemizamo nje emincane futhi umane ulawule ukugeleza kwamanzi ngendlela engenasinyathelo. Ngaphandle kwalokho, isendlalelo sokugezela ngokwaso singashintshwa sibe ngama-degree angama-360, ukuze sikunikeze induduzo ephezulu ngenkathi usebenzisa ifenisha yokugezela, noma ngenkathi ucoca ikamelo lakho lokugezela.
Ipayipi lokugezela lesiliva elinezibambo ezimbili linikeza isiphetho se-chrome esifana nesibuko. Lesi sitayela esibizwa ngeze siyinto enhle impela ngakho-ke ifaneleka kakhulu kunoma yikuphi ukuhlobisa kwanamuhla kokugezela. Lokhu ipayipi lokugezela le chrome yayicwebezelwe kancane ukuze inikeze ukuthinta okuhle kule gebhu yombhobho yokugezela chrome 2 izibambo. Ingxenye evamile ecwebezelayo ye-chrome isanda kuncishiswa kancane ukuze inikeze ukubukeka okukhethekile. Njengoba ukwazi ukubona, i-WOWOW ibheka izindlela ezahlukahlukene zokwenza umhlobiso wakho wokugezela ukhetheke futhi uhluke.
Isikhiphi sephethini yokugezela yekhwalithi ephezulu yemakethe
Izinto zokwakha isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu se-chrome 2 izibambo ze-WOWOW nakanjani zisezingeni eliphezulu emakethe. Kusetshenziswa izinto zensimbi eziqinile kuphela njengensimbi engagqwali, ithusi ne-zinc alloy. Lokhu kuqinisekisa ikhwalithi ephezulu nokukhuthazela kwempilo ende. Lezi zinto zensimbi eziqinile zingaphezu kwezindinganiso ezijwayelekile zomkhakha. I-WOWOW isebenzisa nezinto zekhwalithi engcono kunamanye ama-A-brand aziwa emakethe. Ngalezi zinto zokwakha zensimbi eziqinile, i-WOWOW iqinisekisa ukuthi isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu se-chrome 2 ngeke iphulwe. Ikakhulukazi isixhumi sethusi, ingqele yethusi namantongomane ethusi akha ubunye obunye obuhambisanayo obuqinile futhi obunokugqwala. Ngaphandle kwalokho, lezi zinto ziqinisekisa uku
Vikela ikhwalithi lamanzi yingakho impilo yakho neyomndeni wakho.
Isibambo sepayipi sokugezela se-WOWOW chrome 2 izibambo ziza nesitishi sokuncoma sokukhipha amanzi. Ngale ndlela ungaklama isinki yakho yokugezela njengobunye bunye. I-pop up drain stopper ingaqhutshwa kalula ngokuthinta okuncane komunwe wakho. Ngale ndlela ungavumela wonke amanzi ageleze kalula. Futhi ngaphandle kwemisindo ephazamisayo ngenxa yomklamo wayo omusha.
Isikibha sokugezela esingenabungozi se-chrome 2 sibamba
I-aerator esezingeni eliphezulu yeNeoperl ikunikeza ukugeleza kwamanzi ngobumnene nangokushelela. Ngenxa yokulawula ukugeleza kwamanzi okusha, uzokhululeka ekuchaphazelweni ngamanzi njengoba usebenzisa ompompi bakho bokugezela. Njengoba yaklanywa ngobuhlakani, ibuye ikongele amanzi angaphezu kuka-50%. Ngakho-ke uzokwazi ukunciphisa izindleko zakho zamanzi kanye nezibambo ze-WOWOW's bathroom chrome 2. Isikhumulo sezindiza iNeoperl siyatholakala futhi singahlanzwa nje noma sishintshwe wedwa.
Njengoba i-WOWOW ikunikeza inani elingcono kakhulu lemali ngezibambo zalo zangasese ze-chrome 2 izibambo, siyaqiniseka ukukunikeza isikhathi sewaranti seminyaka emi-3. Sibonile amakhasimende amaningi abuyayo ethenga ompompi bethu bendawo yokugezela futhi, futhi le ompompi yokugezela isetshenzisiwe nasezindaweni eziningi zomphakathi. Ngakho-ke inhloso yethu yekhwalithi enhle iqinisekiswa ngamakhasimende ethu omhlaba jikelele. Umbozwe yisiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90 lapho uthenga ipayipi lethu lokugezela. Uma ungeke uqiniseke ngompompi wokugezela chrome 2 izibambo, uzothola imbuyiselo ephelele ngaphandle kwemibuzo ebuziwe. Ngakho-ke ungathenga ipayipi lethu lokugezela i-chrome 2 izibambo eziyi-100% ngaphandle kwengozi!
Izinzuzo ze indlu yangasese ompompi chrome Izibambo ezi-2 ngamafuphi:
 Isikhiphi sokugezela esakhiwe ngokuyisisekelo
 Ukuthinta okungafani nalutho kwe-chrome
 Kulula ukusebenza
 Kwenziwe ngezinto ezinkulu zethusi
I-SKU: 2320300C Categories: Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile, Amanzi okugeza Tags: I-American standard, phatha kabanzi, izibambo ze-lever